Pakistàna: mety ho voarara noho ilay lalàna vaovao ‘henjana dia henjana’ ireo sehatry ny media sôsialy · Global Voices teny Malagasy
Loza mitatao ho an'ny fahalalahana maneho hevitra ireo fepetra.
Voadika ny 07 Desambra 2020 11:13 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, English, Español, Français, বাংলা, Ελληνικά, English
sainampirenena Pakistaney. Sary tao amin'ny sehatra ho an'ny daholobe. Via Me Pixels.
Niteraka ahiahy momba ny fahalalahana maneho hevitra sy ny zon'olombelona ao Pakistàna ny fampidirana hanan-kery ilay lalàna vaovao mifehy ny media sôsialy. Araka ilay lalàna vaovao, hiatrika fandraràna sy sazy ara-bola izay rehetra sehatry ny media sôsialy tsy manaiky hankato ireo fangatahana avy amin'ny Pakistan Telecommunication Authority (PTA) (manampahefana misahana ny fifandraisandavitra) hanesorana votoaty.
Ny 20 Oktôbra 2020 fotoana nankatoavany azy, rehefa avy namoaka fanambaràna tao amin'ny “the Gazette” ny fanjakana dia nampidirina hanan-kery ireo Fepetra Fanesorana sy Fibahanana ireo Votoaty Tsy Manaraka ny Lalàna ety anaty Aterineto. Ny Novambra vao navoaka ho fantatry ny vahoaka ireo fepetra, rehefa navoakan'ny Minisiteran'ny Teknolojian'ny Fampahalalambaovao sy ny Fifandraisandavitra (MoITT) tao amin'ny tranonkalany ny “the Gazette“.
Samy niampanga ireo fepetra vaovao avokoa na ireo mpikatroka ho an'ny zo nomerika, na ireo goavan'ny teknolojian'ny fanolorana tolotra aterineto (ISPs), tamin'ny filazana izany ho henjana loatra sy manitsakitsaka ny lalàna momba ny heloka bevava an-tserasera ao Pakistàna, ary satria ireo fepetra ireo tsy mifanaraka amin'ny tolokevitra naroson-dry zareo sy ny fomba fanao tsara indrindran'ireo indostria.
Hatramin'ny Febroary 2020 ny governemanta no efa nanandrana nametraka amin'ny toerany ny fehezana fepetra iray izay, tsy hoe fotsiny manorotoro ny fanoherana sy mandràra izay doka rehetra lazaina fa tsy mifanaraka amin'ny fitsipika maoraly sy ara-pinoana eo amin'ny fiarahamonina, fa koa mamoritra ireo feo manakiana. Tamin'ny Septambra, raha mbola te-hanohy ny asany ao Pakistàna dia isan'ireo sehatra nahazo fitarainana avy amin'ny PTA mba hanakanana votoaty ny TikTok, PUBG, dating Apps ary YouTube.
Ireo fepetra vaovao, Fanesorana sy Fibahanana ireo Votoaty Tsy Manaraka ny Lalàna 2020 (RBUOC), no nisolo ilay lalàna momba ny Fanohintohinana olona ety anaty tambajotra, tamin'ny Janoary 2020, ary izy ireny dia natao hitarika amin'ny fametrahana ny toko faha-37 ao amin'ny Lalàna 2016 ho Fisorohana ny Heloka Bevava ampiasàna fitaovana Elektrônika (PECA).
Araka ny voalazan'ny RBUOC 2020, azon'ny olona atao ny mampiasa ny fahalalahany maneho hevitra na mizara torohay eny anaty habaka nomerika rehefa tsy “mampitahotra” ,”manohintohina” na “mihantsy hatezerana natao handotoana ny lazan'ny governemantam-paritra na federaly’, na izay olona rehetra misahana asam-panjakana, raha sanatria misy izany dia mety horaisina ho toy ny fandrahonana ny “fahamendrehana, ny fahalemana ary ny fiarovana ao Pakistàna” ary mety ho esorina na hobahanana. Omen'ireo fepetra ireo fahefana ny PTA hanaisotra na hibahana izay zavatra rehetra heveriny fa mifanohitra amin'ny fitondrantena mendrika sy ny maoraly — mety ho hatramin'ny rafitra manontolo anaty tambajotra mihitsy — araka izay voafaritra ao anatin'ny Lalàna Famaizana ao Pakistàna. Hoterena irao orinasa mpanome tolotra media sôsialy mba hanome amin'ny endrika azo vakiana sy mora takarina ho an'ny PTA izay torohay na angondrakitra rehetra, izay mety hahitàna ny mombamomba, ny fifandraisana rehetra, ny votoaty ary izay torohay hafa rehetra momba ny mpampiasa tambajotra.
Mbola itarin'ireo fepetra ireo ho lavidavitra kokoa ny fahefan'ny PTA, mihoatra noho izay efa voafaritra tany am-piandohana tao anatin'ny toko faha-37 amin'ny Lalàna 2016 ho Fisorohana ny Heloka Bevava ampiasàna fitaovana Elektrônika (PECA) no sady manome fahefana ny PTA ihany koa handrakitra ireo orinasa iraisampirenena momba ny teknolojia, fahefana iray tsy nomena tao anatin'ilay Lalàna voalohany niaingàna ary mijanona ho ivelan'ireo fahefana efa natolotra tany aloha. Apetraky ny toko faha-9 ihany koa ny momba ireo andraikitra sy adidin'ireo orinasa mpanome tolotra media sôsialy, izay mfanohitra amin'ireo fanasiana fetra ireo fepetra tetezamita ho an'ireo indostria misahana teknolojia ao anatin'ny PECA. Raha toa tsy mankato na manaisotra votoaty ao anatin'ny 24 ora ,na ora enina raha misy ny hamehana, ireo orinasa mpanome tolotra aterineto na media sôsialy, dia mety hiatrika sazy ara-bola tafakatra hatramin'ny 500 tapitrisa ropia (3,14 dolara amerikàna), ary mety ho voarara.
Fanehoankevitr'ireo mpandray anjara voakasik'izany
Nisy ny fanehoankevitra mivaivay avy amin'ireo sehatra tsy miankna mpandray anjara, izay efa nampita ny ahiahin-dry zareo momba ireo fepetra vaovao ireo tamin'ny alàlan'ny fanambaràna isankarazany sy taratasy nalefa ho an'ny praiminisitra. Naneho ny ahiahiny ny Asia Internet Coalition (AIC), fikambanana iray misy ireo orinasa goavana misahana ny teknololia, toy ny Amazon, Facebook sy Google, ary nilaza fa mety ho sarotra ho an'ireo orinasa mpanome tolotra media sôsialy ny hanohy hiasa ao Pakistàna eo ambanin'ireo fepetra ireo:
Hanimba ny fahafahan'ny olona miditra amin'ny aterineto malalaka sy misokatra ireo fitakiana henjana dia henjana momba ny fampiantranoana angondrakitra, ary hanidy ny toekarena nomerika ao Pakistàna tsy hifandray amin'izao tontolo izao. Mampangorintsina ny mahita ireo fahefan'ny PTA midadasika be, manome alàlana azy hanery ireo orinasa manome tolotra media sôsialy hanitsakitsaka ireo fenitra efa napetraka momba ny zon'olombelona mahakasika ny fiainana manokana sy ny fahalalahana maneho hevitra.
Mihevitra ny hihetsika mifanaraka amin'ny lalàna ny Internet Service Providers Association of Pakistan (ISPAK) hanoherana ireo fepetra vao haingana ireo rehefa tafapetraka ny tetikadin-dry zareo, ary mety hanohitra ireny fepetra ireny eny anatrehan'ny fitsaràna ihany koa.
Nanohitra ireny fepetra ireny ihany koa ireo mpikatroka ho an'ny zo nomerika ary mino fa tsy hoe fotsiny manitsakitsaka ny zon'ny olompirenena tsirairay ho afaka maneho hevitra an-kalalahana eny anaty habaka aterineto izy ireny, fa koa mametraka azy ireo ho amin'ny toerana marefo. Nandefa bitsika misy antsipirihany momba ireo fepetra ny Media Matters for Democracy:
Indro ny fandalinana fohy ny sasany amin'ireo ahiahy goavana apetrak'ireo andininy amin'ireo Fepetra 2020 Fanesorana sy Fibahanana Votoaty. #SocialMediaRules#PECA pic.twitter.com/rH6ggxpIzY
— Media Matters for Democracy (@mmfd_Pak) 19 Novambra 2020
Namoaka ihany koa izy ireo fanambaràna iray nitakiana ny governemanta “hampitsahatra avy hatrany ny fametrahana ireny fepetra ireny sy hanomboka fakànkevitra manana ny lanjany sy azo itokiana, mangarahara, ahitana ny ankolafy rehetra, ary afaka mamaly ireo ahiahy rehetra napetraka momba ny fizotran'ilay fifampidinihana tany aloha.”
Farieha Aziz avy amin'ny BoloBhi, vovonana iray miasa momba ny zo nomerika sy ny fahalalahan'ny olontsotra, dia miteny fa mila manivana ny tenany ireo olompirenena na hamoy tanteraka ny fahafahany miditra amin'ireo sehatry ny media sôsialy raha toa ka tsy voahaja ireny fepetra ireny. Raha ny Digital Rights Foundation kosa namoaka fanambaràna iray milaza fa “tena velona ahiahy fatratra tokoa ry zareo amin'ireo dingana roa narahana sy nentina nankatoavana ireo fepetra, tsy nisy fankànkevitra misy dikany sy mangarahara, ary ny fidiran'ireny fepetra ireny amin'ny fahalalahana omen'ny Lalàmpanorenana ao amin'ny firenena.” Nolavin'ny Fikambanan'ireo vovonan'ny mpanao gazety tsy miankina ety anaty tambajotra ao Pakistàna koa ireo fepetra vaovao ireo.
Tania Aidrus, mpanolotsaina manokana fahiny momba ny e-governance tao amin'ny praiminisitra ary ankehitriny dia filohan'ny Hetsika “Digital Pakistan Vision” nibitsika hoe :
Tsy mitondra velively mankany amin'ny fampivoarana maharitra ny fandrahonana. Ilain'ireo goavan'ny teknolojia ny mampiasa fotoana & loharanonkarena ao anatin'ny fahatakarana ny fanahin'ny eo an-toerana ireo & ilain'ny governemanta ny mijery kokoa ny zavamisy momba ny fangatahana ataony.
TSY MAINTSY manao tsara ny zavatra rehetra iska, raha tsy izany dia ho tavela eo ny olompirenentsika. https://t.co/5MHKXDQKPG
— Tania Aidrus (@taidrus) 20 Novambra 2020
Tsy hanao afa-tsy ny vao mainka hanaratsy ny toedraharaha momba ny zon'olombelona ao Pakistàna ireo fepetra vaovao. Ho an'ny Tranoben'ny Fahalalahana, ny tatitra isantaona momba ny Fahalalahana Erantany 2020, izay manombana ny fahafahan'ny olona misitraka ny zo pôlitika sy sivily any aminà firenena miisa 210, manana isa 38 amin'ny 100 i Pakistàna (malalaka amin'ny ampahany). Tamin'ny Andro Erantany ho an'ny Aterineto, ankalazaina rehefa 20 Oktôbra, navoakan'ny Freedom Network ny tatitra iray momba ny toeran'ny Zo Nomerika ao Pakistàna, tamin'ny fanamarihana fa nisy ”fiakarany ny sivana, ny kabarim-pankahalàna, ny fanarahamaso nomerika ary ny fanitsakitsahana ny fiainana manokan'ny olona, ny fandisoambaovao sy ny fanelezana vaovao diso ety anaty aterineto.”